Gợi ý 5 thực đơn mâm cỗ truyền thống dễ làm thơm ngon cho gia đình | Muasalebang - Muasalebang
Gợi ý 5 thực đơn mâm cỗ truyền thống dễ làm thơm ngon cho gia đình | Muasalebang
Đang Đọc: Gợi ý 5 thực đơn mâm cỗ truyền thống dễ làm thơm ngon cho gia đình | Muasalebang in Muasalebang
1 kuqala Imenyu yethreyi yendabuko 1
1.1 Ama-Appetizers: Isaladi yenkomo eyosiwe, impushana yezimfanzi ethosiwe, imbuzi engavamile enolamula
1.2 Izitsha eziyinhloko: Inkukhu ephekiwe enamaqabunga kalamula, isobho elinemibala emihlanu, inyama yenkomo ethosiwe neklabishi
1.3 Izidlo zaseceleni: Izithelo nemifino ebilisiwe, ubhatata wamakhokho
1.4 Uphudingi: Isithelo
2 2 Imenyu yethreyi yendabuko 2
2.1 I-Appetizer: isaladi yemifino, imiqulu ethosiwe yasentwasahlobo, i-squid egcwele inyama ethosiwe
2.2 Izitsha eziyinhloko: Inkukhu ebilisiwe, inyama yenkomo ethosiwe exutshwe, i-snapper ebomvu ene-soy sauce, isobho lebhola elixutshwe
2.3 Uphudingi: Irayisi elinamathelayo elinuka kamnandi
3 3 Imenyu yethreyi yendabuko 3
3.1 I-Appetizer: Isaladi yempande ye-lotus enezimfanzi nenyama, ama-spring roll nama-shrimp kanye nenyama enezimfanzi
3.2 Izitsha eziyinhloko: Inkukhu yesipinashi, ingwane ethosiwe exutshwe, isobho lemilenze yengulube eyisitshulu namahlumela ngoqalo
3.3 Isitsha esiseceleni: Vietnamese Kimchi
3.4 I-Dessert: I-coconut jelly
4 4 Imenyu yethreyi yendabuko 4
4.1 Ama-appetizers: ama-spring rolls, ama-taro spring rolls, ama-spring rolls, ama-spring rolls
4.2 Isifundo esikhulu: Isoseji yengulube yamantongomane, amaroli entwasahlobo athosiwe, isobho lenkukhu le-bamboo elimisiwe
4.3 Izitsha ezihambisanayo: Radish, sauerkraut
4.4 I-Dessert: Ikhekhe Lenkomo
5 5 Imenyu yethreyi yendabuko 5
5.1 I-Appetizer: Izimfanzi ezifakwe i-lemongrass, isaladi ye-papaya enezimfanzi nenyama
5.2 Izitsha eziyinhloko: Izinhlanzi ezinkulu ezithosiwe, ikhekhe lesisu sengulube eyosiwe, ibhodwe elishisayo lenkukhu eliphekwe ngamaqabunga e-Giang
5.3 Izitsha ezihambisanayo: Imifino ebilisiwe nemifino eboshiwe
5.4 I-Dessert: i-ginseng tonic
kuqala Imenyu yethreyi yendabuko 1
Ama-Appetizers: Isaladi yenkomo eyosiwe, impushana yezimfanzi ethosiwe, imbuzi engavamile enolamula
Ukuvulwa kwethreyi yendabuko kuzoba i-appetizer enesaladi yenkomo eyosiwe ekhangayo kakhulu. Inyama yenkomo iyosiwe ize iphekwe nje, ngakho-ke ithambile kakhulu futhi inothile kodwa isagcina ubumnandi bemvelo, obuxutshwe nesinongo esincane sikapelepele, esimnandi nakakhulu.
Ngaphezu kwalokho, iphunga lerayisi le-Bui Bui kanye nesoso yenhlanzi enoshukela enoshukela futhi ebabayo egcwele inyama yenkomo, limnandi kakhulu, kanye no-anyanisi kanye ne-basil ebabazeka kancane, lokho kwanele ukuvusa ukunambitheka kwalabo abajabulelayo. yona.
Ngemuva kwesaladi yenkomo eyosiwe, kuzoba ne-shrimp ethosiwe enamathiselwe wonke umuntu ayithandayo. Ingqimba yenhlama iyigolide, i-crispy, ayinzima kakhulu, ukulunywa okukodwa kuzofika ngokushesha ku-crispy, chewy, ama-shrimp amnandi okunzima ukuwachaza. Ekugcineni, imbuzi ayivamile futhi i-lemongrass enenyama yembuzi ethambile, enoshukela nemuncu, enosawoti omningi futhi enosawoti.
Izitsha eziyinhloko: Inkukhu ephekiwe enamaqabunga kalamula, isobho elinemibala emihlanu, inyama yenkomo ethosiwe neklabishi
Ngokuza esitsheni esikhulu, sizoba nenkukhu eshisiwe yeqabunga likalamula okhangayo. Inkukhu ithambile, inamanzi futhi ithambile futhi isikhumba esisagolide sinephunga elimnandi elinolamula! Dabula ucezu olu-1 lwenkukhu bese ulucwilisa kusawoti, pepper kanye nolamula ukuze unambitha.
Ukuze ulinganise ukudla okunomsoco, isobho elinemibala emihlanu kuyoba yisinqumo esifanele. Ubumnandi be-kohlrabi, izaqathe kanye ne-cauliflower kuhlanganiswe nokuhlafunwa, ukukhula okucebile kuhlangana kahle nomhluzi ofakwe isinongo, omnandi futhi omnandi.
Okulandelayo kuzoba yinyama yenkomo ethosiwe neklabishi enokuqaliswa okulula kodwa ukunambitheka kuyathandeka kakhulu! Inyama yenkomo ethambile, emnandi ehlanganiswe neklabishi eluhlaza kanye ne-crispy imnandi futhi iyaqabula. Lungiselela inkomishi eyengeziwe yerayisi elishisayo kanye nesoso yesoya ebabayo inhle.
Izidlo zaseceleni: Izithelo nemifino ebilisiwe, ubhatata wamakhokho
Ukuze ujabulele ngesidlo esikhulu, ungadla izithelo nemifino encane ebilisiwe kokubili okune-crispy futhi okumnandi, futhi okunomsoco kakhulu. Ukucwilisa imifino ebilisiwe nge-chilifish sauce futhi ujabulele irayisi elimhlophe kumnandi!
Isitsha esiseceleni esilandelayo esiyinqaba okufanele uzame ubhatata ocwebezelayo ngaphandle, othambile futhi onamafutha ngaphakathi, futhi anongwe ngezinongo ezimbalwa eziyisisekelo ukwenza kube mnandi nakakhulu.
Ukuphetha ithreyi ngepuleti lesithelo kuhle, akunjalo? Isithelo simnandi futhi sipholile futhi sigcwele amavithamini, ukuluma okukodwa kuhle kuwo wonke umzimba futhi kupholile, ngubani ongathandi!
2 Imenyu yethreyi yendabuko 2
I-Appetizer: isaladi yemifino, imiqulu ethosiwe yasentwasahlobo, i-squid egcwele inyama ethosiwe
Ama-mannequins ahlala eyinketho enhle yama-appetizers futhi isaladi yemifino yenkosi iyinketho yale menyu. Amakhowe athambile nahlafunwayo ahlanganiswe nemifino enoshukela necolekileyo exutshwe nengxube enothe kakhulu enoshukela nemuncu ephakelwa ne-shrimp puff pastry iyindinganiso.
Imiqulu ethosiwe yasentwasahlobo ingenye yezitsha zendabuko ezithandwa yiwo wonke umuntu ngenxa yokunambitheka okucebile nokukhangayo. I-Nem ithosiwe ngokujulile, kufihlwe ngaphakathi ukugcwaliswa okucebile okushisayo ngenxa yenyama emnandi yezimfanzi nemifino enomsoco.
I-squid ethosiwe i-crispy, ithambile, imnandi futhi iyahlafuna, ixubene nenyama enamafutha namakhowe anezigaxa, lapho udla kakhulu, i-squid ethosiwe izokwenza uthandeke kakhulu!
Izitsha eziyinhloko: Inkukhu ebilisiwe, inyama yenkomo ethosiwe exutshwe, i-snapper ebomvu ene-soy sauce, isobho lebhola elixutshwe
Inkambo eyinhloko kule menyu yesi-2 izoba inkukhu ebilisiwe okulula ukuyenza kodwa emnandi kakhulu. Ungqimba lwesikhumba senkukhu luyigolide, lunwebeka futhi lu-crispy, luhlangene nenkukhu e-chewy sweet engomile.
Okulandelayo yisitsha senkomo esinothile esithosiwe esinenyama yenkomo ethambile, enoshukela ephakelwa nemifino enoshukela e-crispy nenomsoco. Lesi sidlo simnandi ukudliwa nelayisi elishisayo!
Idliwa kanye nenkukhu ebilisiwe kanye nenyama yenkomo ethosiwe kuzoba i-snapper ebomvu emnandi eshisayo enesoso yesoya. Inyama yenhlanzi emnandi enikezwe isoso ecebile exutshwe nejinja encane ebabayo iyathandeka kakhulu.
Uma unesidlo esiphundu, yebo, awukwazi ukwenza ngaphandle kwesobho. Nesobho elixubile lebhola elinemibala eluhlaza, ebomvu, nemhlophe evela emifino ehlanganiswe namabhola acwebileyo nahlafunwayo ahlanganiswe kumhluzi omnandi nomnandi. Ukukhonza ngelayisi kanye ne-vermicelli kuhle!
Uphudingi: Irayisi elinamathelayo elinuka kamnandi
Irayisi elinamathelayo elinamathelayo elinombala onsomi oheha iso kanye nobhontshisi obuluhlaza ngokuphuzi bashaywa ngokulinganayo phezulu. Gcoba ucezu olu-1 lwerayisi elinamathelayo, elinephunga elimnandi elinobhontshisi obushelelezi, obumnandi obuluhlaza bese wengeza ubisi olunamafutha kakhukhunathi nosawoti wesesame, bese ujabulele.
Xem Thêm Quả dừa nước là quả gì? Tác dụng, nơi mua, giá cả, dừa nước làm gì ngon | Muasalebang
3 Imenyu yethreyi yendabuko 3
I-Appetizer: Isaladi yempande ye-lotus enezimfanzi nenyama, ama-spring roll nama-shrimp kanye nenyama enezimfanzi
Ama-appetizers emenyu yesidlo sakusihlwa esingunombolo 3 kuzoba isaladi yempande yelotus enezimfanzi nenyama yengulube nama-spring rolls anezimfanzi nezimfanzi ezinenyama.
Iphakethe leqabunga le-lotus kanye nezimfanzi ezinenyama e-crispy exutshwe nesoso yenhlanzi emuncu nemuncu, elimnandi, elinosawoti kanye nosawoti limnandi kakhulu. Imfanzi i-crispy futhi iyintsha, inikezwa nesisu sengulube esithambile esixutshwe namaqabunga apholile e-laksa. Lungiselela i-shrimp puff pastry futhi udle ngesaladi iposi elijwayelekile.
Amaroli asentwasahlobo anemfanzi nezimfanzi anenyama ephuzi, ungqimba lwangaphandle olucwebile lwerayisi oluhlanganiswe nokushisayo, izimfanzi ezicebile kanye nokugcwaliswa kwenyama, okucwiliswe nge-chili sauce noma isoso e-soggy, okumnandi nakakhulu.
Izitsha eziyinhloko: Inkukhu yesipinashi, ingwane ethosiwe exutshwe, isobho lemilenze yengulube eyisitshulu namahlumela ngoqalo
Inkukhu yesipinashi enoqweqwe lwangaphandle lwerayisi elinamathelayo igaywe ngokujulile kanti ngaphakathi kunongqimba olunamathelayo lwerayisi elinamathelayo, eduze kwenkukhu enephunga elimnandi, okuyiqanda lenkukhu ekhuluphele elihlanganiswe nembewu yelotus enoshukela ne-crispy kanye nejube elinomsoco, .. .
I-squid ethosiwe exutshiwe nayo ijwayelekile futhi isondelene nethreyi yerayisi yaseVietnam. Uma udla, uzozwa ukuthi ingwane ithambile, ayihlafuni kakhulu, kodwa imnandi futhi imnandi kuhlangene nemifino enomsoco.
Okudliwa nalezi zitsha ezi-2 ezingenhla kuzoba isobho elinothile eliyisitshulu semilenze yengulube enemilenze yengulube eqinile, ecwebile kodwa ethambile futhi emnandi okulula kakhulu ukuyidla eduze kwamahlumela athambile futhi amnandi oqalo. Konke kwakha ukunambitheka okukhangayo kwethreyi lerayisi lomndeni.
Isitsha esiseceleni: Vietnamese Kimchi
Ukwengeza ukunambitheka okwengeziwe esidlweni, ungadla nge-kimchi yaseVietnam, izoba mnandi ngokuqinisekile! I-Kimchi i-crispy, i-spicy, imnandi futhi igcwele ukunambitheka okuzokwenza uthande kusukela ekulunyweni kokuqala.
I-Dessert: I-coconut jelly
Ngemva kokudla okunomsoco okugcwele izitsha ezimuncu, ezibabayo, ezinosawoti nezinoshukela, ipuleti lejeli elibandayo likakhukhunathi lifaneleka kakhulu. Ukunambitheka okumnandi kwamanzi kakhukhunathi kanye nephunga elimnandi lobisi lukakhukhunathi olunamafutha uma ujabulela ngokuqinisekile kuzokwenza waneliseke!
4 Imenyu yethreyi yendabuko 4
Ama-appetizers: ama-spring rolls, ama-taro spring rolls, ama-spring rolls, ama-spring rolls
Akulona ihaba ukusho ukuthi i-cha pu ibhekwa njengenye yezidlo ezidumile zaseNingizimu. Uma uyidla, uzozwa iphunga elimnandi lenyama kuhlanganiswe nokunambitheka okunamafutha kaphizi, ukushwabana kwesikhunta esimnyama esixutshwe nephunga elimnandi likapelepele wogebhezi.
I-Crispy spring rolls ehlanganiswe nokugcwala okuthambile, okumanzi, okucebile kuhlanganiswe ngokuphelele ku-taro enamanzi, enamafutha! I-Spring rolls inephunga elimnandi, i-crunchy, ifakwe ubumnandi obumnandi bengulube, ukucwiliswa nge-sauce encane ye-chili inhlanzi kumnandi!
I-flavour ehlukile kakhulu, kakhulu yesi-Vietnamese okungaba yi-Nem chua kuphela. Kuyinhlanganisela yenyama emnandi nemuncu exutshwe nesikhumba esiqinile, exutshwe nokunambitheka okubabayo kukagalikhi kagalikhi kanye nokunambitheka okumuncu kwe-acrid kwamaqabunga kagwava, okwenza noma ubani oyidla kanye bese ekhumbula unomphela!
Xem Thêm Cuối tháng "cháy túi", ăn món gì ngon bổ rẻ? | Muasalebang
Isifundo esikhulu: Isoseji yengulube yamantongomane, amaroli entwasahlobo athosiwe, isobho lenkukhu le-bamboo elimisiwe
I-Peanut ingulube yengulube iyisidlo esikhethekile kuleli threyi yerayisi. Imiqulu yengulube isitshulu ithambile, igcwele ukunambitheka okumnandi kwamanzi kakhukhunathi eduze kwesesame elimhlophe namakinati anamafutha. Lesi sidlo simnandi nelayisi elishisayo noma isinkwa esishisayo.
Engeza ama-spring rolls athosiwe ukuze wenze ithreyi yendabuko ikhetheke kakhulu. Imiqulu eyosiwe yasentwasahlobo inephunga elimnandi, igcwele ukunambitheka, idliwa namaqebelengwane elayisi athambile ahlafunwayo nemifino emisha bese icwiliswa ngesoso yenhlanzi emnandi nemuncu, kuqinisekisiwe ukuthi izoba mnandi futhi ikhohlwe indlela eya ekhaya.
Uma ungajabulela isobho lenkukhu le-bamboo elimisiwe, wonke umuntu kufanele aziqhenye ngalo. Umhluzi ocebile uhlangana kahle nenkukhu emnandi, ethambile futhi amahlumela e-crispy bamboo akhanga kakhulu. Susa ithreyi lerayisi futhi ulijabulele nelayisi elimhlophe ngokushesha!
Izitsha ezihambisanayo: Radish, sauerkraut
Uma uke waba nama-spring rolls ngaphandle kwe-palanquin kanye ne-sauerkraut ekhethiwe, ithreyi yerayisi ayigcwele, akunjalo?
Ngephunga layo elihlukile kanye nokunambitheka okucebile okumnandi nokumuncu, i-crispy futhi imnandi, ubani ongayithandi! I-sauerkraut efakwe emanzini anosawoti enombala oluhlaza oheha iso, ukuluma okukodwa kuhlanzekile futhi kupholile ngokunambitheka okumuncu okuncane uma kudliwa nama-spring rolls, akudingi ukulungiswa.
I-Dessert: Ikhekhe Lenkomo
Ekugcineni, ungaphatha umndeni wakho nge-dessert yenyama yenkomo emnandi. Ikhekhe lithambile, lithambile, lilula, linephunga elimnandi lobisi lukakhukhunathi, futhi lisamnandi futhi likhuluphele! Ukucwilisa amaqebelengwane enyama yenkomo kusawoti wesesame bese uconsa ubisi lukakhukhunathi ngaphezulu kumnandi!
5 Imenyu yethreyi yendabuko 5
I-Appetizer: Izimfanzi ezifakwe i-lemongrass, isaladi ye-papaya enezimfanzi nenyama
Ama-shrimp ane-lemongrass ayisiphakamiso esihle se-appetizer. Umbala omuhle obomvu wezimfanzi kanye nephunga elijabulisayo le-lemongrass namaqabunga omcako kumnandi kakhulu. Izimfanzi ezishisayo zisanda kuphekwa, ngakho-ke zigcina ubumnandi, inyama yemfanzi ijiyile futhi icwebile, ukucwiliswa ngesoso yokudipha ukudla kwasolwandle kuba mnandi nakakhulu.
I-papaya shrimp kanye nesaladi yenyama inakho konke ukunambitheka okumuncu, okubabayo, okusawoti, okumnandi okuhlanganiswe ne-papaya e-crispy kanye nezimfanzi ezintsha ezimnandi, ezifanele kakhulu ukudla komndeni.
Izitsha eziyinhloko: Izinhlanzi ezinkulu ezithosiwe, ikhekhe lesisu sengulube eyosiwe, ibhodwe elishisayo lenkukhu eliphekwe ngamaqabunga e-Giang
Inhlanzi enkulu ethosiwe eshisayo enesikhumba esicwebezelayo, eluma umsindo wemisindo ehlabayo eduze kwenyama emnandi, enamanzi, enezela amafutha amancane ka-anyanisi anamafutha akhanga kakhulu. Lesi sidlo, esidliwa ne-vermicelli esisha, iphepha lerayisi nemifino eluhlaza nesoso yenhlanzi enoshukela nemuncu noma isoso yenhlanzi yesinongo iphelele kakhulu.
Uma kunombolo yemenyu yesi-4, kukhona i-spring roll eyosiwe, singashintsha ama-spring rolls ngenyama ethosiwe, nayo emnandi kakhulu. Inyama ethosiwe, enephunga elimnandi ethosiwe ehlanganiswe nesikhumba esicwebezelayo, edliwa ngesinkwa esithambile kanye nekhukhamba, amakhambi ama-crispy ayamangalisa kakhulu!
Ibhodwe elishisayo lebhodwe elishisayo lenkukhu lishiya esitofini lizoshukumisa izinzwa zakho! Inyama yenkukhu eqinile imuncwa ngokulinganayo ebhodweni elishisayo lamaqabunga e-Giang ahlanganiswe nokunambitheka okubabayo kwepelepele ekhanga kakhulu.
Izitsha ezihambisanayo: Imifino ebilisiwe nemifino eboshiwe
Ikhonzwa ngemenyu enkulu egcwele izinhlanzi nenyama, izobiliswa izithelo nemifino ngesidlo esilula kakhulu kodwa esibamba kakhulu!
Isoso yokudipha eboshiwe inothile, inosawoti, imnandi, futhi inephunga elimnandi lesoso yezinhlanzi namafutha ashubile, anamafutha. Ngaphezu kwalokho, ukunambitheka okubabayo kukapelepele kuletha ukunambitheka okukhuthaza kakhulu. Ukucwilisa imifino ebilisiwe enoshukela ne-crispy embizeni yesitshulu bese udla nelayisi elishisayo “inombolo dzach”.
I-Dessert: i-ginseng tonic
Ingilazi epholile, eqabulayo ye-ginseng izoba idessert ekhangayo yale menyu yokugcina.
Isiphuzo esimnandi sikashukela we-alum onezimpande ze-crispy lotus kanye nembewu ye-boi boi enazo zonke izithako ezinomsoco yi-jujube, i-tapioca, i-longan, indlebe yendawo yonke,… Engeza iqhwa futhi ujabulele ukuvuka kuhle kakhulu!
Ngakho-ke i-Dien May XANH ikuphakamise amamenyu ama-5 alula futhi amnandi esidlo sakusihlwa. Ngethemba, ngalesi sihloko, uzoba nezitsha ezikhangayo nezinomsoco ukuze uthole ukudla okuphelele komndeni!
Kuhlelwe nguKhuong Thi Hong Nhung • Kuthunyelwe ngoJanuwari 28, 2022